အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဧပြီလ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဧပြီလ ၂၀၁၅
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဧပြီလ ၂၀၁၅
Posted by kai on Mar 15, 2015 in Editor's Notes | 36 comments
မတ်လသည် မြန်မာပြည်တွင် စနစ်နှင့်သူ၏တော်လှန်ရေးတို့မွေးဖွားရာလဖြစ်သည်။
နှင်းငွေ့၊ နှင်းပေါက်၊ ဆီးနှင်းခဲ ဒဏ်တို့ကို တဆောင်းတွင်းလုံး ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်ခဲ့ရသော ခြောက်သယောင်းထ သစ်ပင်သစ်ကိုင်းတို့ဝယ် ရွက်နုဝေပွင့် ညွှန့်သစ်ဖူးသောလဖြစ်ပါသည်။
မကြာမှီ ဧပြီဝင်ကာ မြန်မာတို့၏နှစ်သစ်ဦးလာတော့မည်။ ယခုနှစ်သစ်သည် စိန့်ပြည်သားတို့အလိုအရ ဆိတ်နှစ်ဖြစ်ကာ မြန်မာတို့အတွက်မူ ၁၃၇၇ နှစ်ဖြစ်လေသည်။
ပြဌာန်းပြီးအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန်တောင်းဆိုထားခြင်းကို ရက်ပေါင်း၆၀လစ်လျှူရှုခဲ့သဖြင့် မန္တလေးမှသည်ရန်ကုန်သို့ ဇန်န၀ါရီ ၂၀မှစတင်ကာကျောင်းသားထုသပိတ်မှောက်ချီတက်ခဲ့ပြီး ၄ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုအရ သဘောတူညီချက်ရပြီးဖြစ်သည်။
မတ်လ ၁၀ရက်နေ့ဝယ် ရန်ကုန်သို့ဆက်လက်ချီတက်ခွင့်တောင်းထားသည့်ကျောင်းသားနှင့်ရဲတို့ လက်ပံတန်းတွင်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြကာ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခံလိုက်ရသည်။
အောင်ပွဲခံ၍ရန်ကုန်ဝင်ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ခဲ့ပဲ ကျောင်းသားကျောင်းသူနှင့်ရဟန်းရှင်လူ ၁၂၇ယောက်ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံလိုက်ရလေသည်။
ရန်ကုန်အရောက်ချီတက်ကြခြင်းကို တားမြစ်ရာတွင် အစိုးရအာဏာစက်နှင့်အတူ မဟနနှင့် မဘသ၏ ၀ီရသူဆရာတော်တို့ကလည်း စာပြန်တမ်းထုတ်ကာ ဓမ္မစက်ပြခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
သို့ပါ၍ ယခုလတွင် နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေး အကြောင်း ဤသူမြင်မိသလိုရေးပါမည်။
ဘာသာရေးဟူသည် လူတယောက်ချင်း၏ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံရေးမှာမူ အများလူထုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
လူသားတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုခေတ်ဦးတွင် ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေး ရောသမယှက်တင်ရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ကြရမည်။ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးအားလုံးလိုလိုပင် စစ်ရေးအားဖြင့်သာသနာပြု အာဏာယူ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြဖူးသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။
အလယ်ခေတ်ဥရောပ (အေဒီ ၅ရာစုမှ ၁၅ရာစု)တွင် ခရစ်ယန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်သူတို့၏ကျောင်းတော်များသည် အုပ်ချုပ်သူဘုရင်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးသည်။ ဘုရင်များသည် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်ပင်အုပ်ချုပ်ကြရပေသည်။ ၁၈-၁၉ရာစုနှစ်များဖက်ရောက်မှ လစ်ဘရယ်အတွေးအခေါ်များထွန်းကားလာကာ ကျောင်းတော်နှင့် ဘုရင့်အာဏာကို လူထုကကန့်သတ်အုပ်ချုပ်စေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်ဒေသများတွင် မူလနတ်ကိုးကွယ်မှုတို့များသော်လည်း အစ္စလမ်သာသနာ(အေဒီ၆ရာစု)ပေါ်လာပြီးနောက်မူ နိုင်ငံရေးတွင် လုံးဝဥသုံပါဝင်စွက်ဖက်သည်ကိုတွေ့ရ၍ ယနေ့အထိပင် တိုင်းပြည်အခြေခံဥပဒေအထိအစ္စလမ့်သာသနာရေးလွှမ်းမိုးပါတ်သက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ရှရီယာဥပဒေသည် အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံများကျင့်သုံးရသည့် အမြုတေဥပဒေဖြစ်ပြီး မွတ်စလင်များက မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ လိုက်နာကြရပေသည်။
အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင်ကား ဂေါတမဘုရားရှင်မပွင့်ခင်လက်ထက်ကပင် ဘုရင်မင်းတို့သည် ဗြဟ္မဏတို့၏ဝေဒ၊ဗေဒင်တို့ဟောပြောပို့ချချက်များအရ တိုင်းပြည်စီမံအုပ်ချုပ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓပွင့်ပြီး(ဘီစီ၅ရာစု)နောက်ဗုဒ္ဓသည် ခမည်းတော်၏ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပါတော်မမူသလို ဗိမ္ဗိသာရမင်းကို သားတော်အဇာတသတ်မှ ထောင်သွင်းခြေခွဲဆားသိပ်နှိပ်စက်နေသည့်တိုင် ၀င်စွက်ဖက်တော်မမူချေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးတို့နှင့် များစွာကင်းလွတ်နေထိုင်လေ့ရှိသည့် သာဓကများရှိပေရာ ထိုခေတ်နိုင်ငံရေးတွင် ဘုရားသားတော်များလည်း ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်ကို ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ချမှတ်ပေးထားသော စည်းကမ်း ၀ိနည်းများဖြင့်လည်းချိန်ထိုးကြည့်နိုင်သိနိုင်သည်။
သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးရောယှက်သွားသည်မှာ အသောကမင်း(ဘီစီ၂ရာ)လက်ထက် ဖြစ်ပါ၏။
အမေရိကပြည်သည် ဥရောပမှ ဘာသာရေးကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူများနှင့်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လူသားတို့၏ ခွင့်တူညီမျှမှုကို ပုံဖေါ်ဆောင်သော စာသား “All men are created equal” ဟူသည် အမေရိက၏လွတ်မြောက်ရေးကြေငြာစာတန်း(၁၇၇၆)တွင်ပါသည်။ ခွင့်တူညီမျှမှုကို ဦးစွာဖွင့်ဆိုပြီးနောက်မှ အမေရိကပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်ခဲ့ကြခြင်းတည်း။
ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးရောယှက်မှုတို့အား နံရံကာကန့်သတ်တားမြစ်ခြင်းကိုမှု အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း ပထမအကြိမ်(၁၇၉၁)တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပေရာ အခြားနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများတောင်းဆိုတင်သွင်းမှု အားလုံးထက်ပင်ရှေ့ရောက်ပြဌာန်းကြသည်ကိုတွေ့ရမည်။ အခြေခံဥပဒေအရခရစ်ယန်ကျောင်းတော်နှင့် နိုင်ငံရေးဆက်နွယ်မှုတို့ကို ရှင်ခန်း/သေခန်းဖြတ်ပေးသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်နှင့် သမ္မတများ ခရစ်ယန်ဘာသာကိုးကွယ်ကြစေကာမူ တိုင်းပြည်၏ အာဏာခွဲဝေ/ပေးယူမှုတွင် ဘာသာရေးစွက်ဖက်မှုမပါဝင်နိုင်တော့။
အိမ်ဖြူတော်သို့ ခရစ်ယန်ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ အာဘော်/သြ၀ါဒပေးနိုင်ရန်လည်းအကြောင်းမရှိချေ။
ဒိမိုကရေစီနှင့် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ကြရာတွင် လွန်စွာအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်ဟုဟူလို။
အနော်ရထာမင်းသည် အရည်းကြီးများကို လူဝတ်လဲစေ၍ စစ်တပ်အတွင်းသို့သွတ်သွင်းပြီးနောက် ကြီးမားလာသောစစ်သည်အင်အားဖြင့် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတည်ထောင်ပါသည်။ ထေရာများအား ရာဇပုလ္လင်ထက်မြင့်သောနေရာပေး၍ မင်းဆရာ့အကြံဥာဏ်ကိုလေးစားလိုက်နာသည့်သဘောများတွေ့ရသည်။ တိုင်းပြည်၏အခြေခံပညာရေးကို (အဓိက)သင်ကြားပေးနိုင်သူများမှာ ဘုန်းတော်ကြီးများဖြစ်သွားပေရာ မြန်မာတို့၏ ဓလေ့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအထိပင်အမြစ်တွယ်သွားလေ၏။
ထိုမှဘုရင်မင်းအဆက်ဆက်သည် ရဟန်းများကို မင်းဆရာအဖြစ်တင်မြောက်၍ တိ်ုင်းရေးပြည်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်အကြံဥာဏ်ယူလေ့ရှိသည်။ မြန်မာ့ သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်တွင် ဘာသာရေးသည်လွန်စွာသက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသည်ဟု မြင်နိုင်ပါသည်။
မင်းဧကရာဇ်တို့သိတတ်အပ်သော အဌာရသ အသိပညာ သွန်သင်ဆုံးမလမ်းကြောင်းပေးခဲ့သူများမှာ လူဒီသာပါမောက္ခတို့မဟုတ်သည်ကိုတွေ့ရ၏။
မင်းတုန်းမင်း(ငယ်အမည် မောင်လွင်) ငယ်စဉ်က ငါးခြောက်ပြားပျောက်သဖြင့် စံကျောင်းဆရာတော်ကကြိမ်ဖြင့်ရိုက် ဆုံးမခဲ့ခြင်း၊ ညီတော် ကနောင်မင်းသား ရေမြုတ်ဗုံးစမ်းခြင်းကို မင်းဆရာသဘောတော်ကျ ရပ်ဆိုင်းစေလိုက်ခြင်း တို့က နိုင်ငံရေးတွင် ဘာသာရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းပြယုတ်များဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဘ၀ဆုံးခံသပိတ်မှောက်သူတို့တွင် ရဟန်းသံဃာများလည်းတွေ့ရပါသည်။
ဦးဥတ္တမ၊ ဦးဝိစာရတို့သည် လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းရေးခဲ့သည့်ထင်ရှားသော ဘုန်းတော်ကြီးများဖြစ်ကြသလို ဆန္ဒပြခြင်းကို သပိတ်(ဆွမ်းစားသော ခွက်) မှောက်ခြင်းအားဖြင်တင်စားသည်ကိုကြည့်ရခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုမှုတို့တွင် ဘာသာရေး၏အခန်းကဏ္ဍမြင်နိုင်သည်။
လူတို့ကြားတွင်နေ၍ ဆွမ်းခံစားကြရသော ရဟန်းတို့တွင် လူထုပြည်သားတို့ စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေဖြစ်ကြပါသော် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသဖြင့် ၀င်ပါသောနိုင်ငံရေးသည်ကား အောက်မှအပေါ်တက်သော နိုင်ငံရေးမျိုးဖြစ်လေသည်။
မင်းဆရာ အဖြစ် ဘုရင်မှတဆင့် လူထုသို့သွယ်ဝိုက်သြဇာပေး အပေါ်မှအောက်သို့အမိန့်ပေးအုပ်ချုပ်ခြင်းသည်ကား အများလူထု၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်သော နိုင်ငံရေးစွက်ဖက်မှုဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးသည် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ဥပဒေပြုရေး၊ မဏ္ဍိုင်ကြီး (၃) ရပ်ကိုတိုက်ရိုက်စွက်ဖက်ခြင်းကား မပြုရာ။
လယ်တီဆရာတော်ကြီး၏နွားမေတ္တာစာကြောင့် နွားများမသတ်ရမစားရဖြစ်ကာ ထိုမှသည် တိုးတိုးသားခိုးစားကြရသည်အထိ ဥပဒေပြုချက်များ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်အောင် တွန်းတိုက်လုပ်ဆောင်မှုများသည် မြန်မာ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ ဘာသာရေးအား မိမိအာဏာရယူလိုမှုအတွက်နိုင်ငံရေးသုံးကစားခြင်းဖြစ်ပေရာ အခြားတပါးသော လူမျိုးစု၊ သာသနာကိုးကွယ်မှုမတူတိုင်းရင်းသား၊ စာပေစကားကွဲပြားသူများအား ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်လောင်စေရန် ချွန်တွန်းပို့ခြင်းသာဖြစ်စေခဲ့သည်။
အကျိုးဆက်အဖြစ် ရန်ကုန်သာအုပ်ချုပ်ရသည့်အစိုးရဖြစ်သွားသောဦးနုအား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းမှအာဏာသိမ်းနှိပ်ကွပ်လိုက်၍ တိုင်းပြည်ကို စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ခံဘ၀တွန်းပို့ခဲ့သည်သာ ရလဒ်ကျန်ပါသည်။
ဦးနေ၀င်းသည် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ)ခေတ်တွင် ပါတီတွင်း၌ ဘာသာရေးရောယှက်နွယ်မှုမရှိအောင်ထားသော်ငြား အကြွင်းမဲ့သြဇာရှိ အာဏာရှင်နိုင်ငံရေးဖြစ်တည်ရန်အတွက် အမျိုးဘာသာ၊သာသနာကို လက်မည်းကြီး၏လက်အိပ်ဖြူအဖြစ်သုံးခဲ့ပြန်သည်။
မြန်မာ့လူထုအပေါ် သံဃာများ၏ သြဇာသက်ရောက်မှုကိုအသုံးချရန် သာသနာတော် သန့်ရှင်းတည်တံ့ပြန့်ပွားရေး၊ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ ကို ၁၉၈၀တွင်တည်ထောင်ပေးလိုက်ကာ သံဃာများအားမှတ်ပုံတင်စာရင်းထားချုပ်ယူသိမ်းသွင်းခဲ့သည်။
ရှေးမှတ်တမ်းများအရမူ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် သံဃာကိုအုပ်ချုပ်ရန်အတွက် သာသနာပိုင်သံဃာခေါင်းဆောင်ထားခြင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့် ဂိုဏ်းဂဏထားအုပ်ချုပ်ခြင်းတို့အား ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ခွင်ပြုတော်မမူခဲ့ပါချေ။
မြတ်စွာဘုရားသည် ငွေကြေးဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှု တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရမှုကို ရွံ့ရှာစက်ဆုပ်ကာ တောထွက်၍ဘုရားဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်သည့်အလျှောက် ထိုဘ၀အခြေအနေများနှင့်လည်းကင်းအောင် သားတော်သံဃာတို့အား ၀ိနည်းထား တားမြစ်ခဲ့သည်။
အမှန်တကယ်လည်း ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲ၍ ဂိုဏ်းဂဏအားအုပ်ချုပ်မှုသည် အလွန်တရာမှရှုပ်ထွေးလှပါ၏။ ထိုပညာရပ်တို့ကို ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများ၏ တက္ကသိုလ်များ၌ပင် မာစတာ၊ဒေါက်တာဘွဲ့အထိ သတ်မှတ်ပေး၍ စနစ်တကျသင်ယူကြရပေရာ ထိုမျှရှုပ်ထွေးသော လောကီအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းသို့ ရဟန်းတို့အား ပါဝင်ပါတ်သက်မှုရှိနေခြင်းအား ခွင့်ပြုတော်မမူခြင်းမှာများစွာသဘာဝကျသည်ဟုဆိုရမည်။
သို့သော်ငြား ဦးနေ၀င်းတည်ထောင်ပေးထားခဲ့သော မဟန(သံဃာ့မဟာနာယက)နှင့် ယခုခေတ်တွင် အမျိုးဘာသာသာသနာ ဆောင်ပုဒ်နှင့်သိမ်းသွင်းဝင်လာသော မဘသ(အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့)တို့သည် ဒီမိုကရေစီမြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွင် အရေးကြီးသောအချိန်တိုင်း ထဲဝင်ပါဝင်ပါတ်သက်လေ့ရှိသည်ကိုတွေ့ကြရမည်။ အာဏာရှင်စနစ်ကို ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ထားသောစနစ်ပေတည်း။
သို့ဆိုပါသော် သခင်အောင်ဆန်းက စည်းတားခြင်းပြုချင်သော ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေး ရောယှက်နွယ်မှုကို မည်သို့စခန်းဖြတ်ရမည်နည်းမေးခွန်းထွက်လာပါသည်။
ဤသူ၏အယူအဆမှာရိုးရှင်း၏။ ပြည်သူလူထုအားပညာပေး စည်းရုံးယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မတတ်သာသေး အချိန်မကျသေးဟုမဆိုလင့်..။ ယနေ့စလုပ်ကြပါလျှင်နောင်မျိုးဆက် ၃ခုလောက်တွင်မှ ပြတ်ရွေ့လျှော့ကျသွားမည့်သဘောရှိပေရာ စလုံးရေစ,သည် အခြေခံပညာရေးမှဖြစ်ရမည်။
ယခုတွင်ပင်လွှတ်တော်တွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှတင်ထားသော ၁၁ချက်တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီ ဘာသာရေးနွယ်ကျောင်းများအား ဥပဒေအရပိတ်ပစ်တားမြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်ပညာရေးဟူသည် သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအလုပ်ကားမဟုတ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများအတွက်မူ နှစ်ရာချီသွန်သင်ဆုံးမခဲ့ပေးကြသော်ငြား ပင်စင်ယူရပ်နား၍လောကုတ္တရာကိုသာ အားစိုက်လုပ်ကိုင်ကြပါစေ။ ကလေးသူငယ်များအားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတည်းဟူသော အလွန်တရာရှုပ်ထွေး အလုပ်များသည့်လောကီအလုပ်မျိုးကို သာသနာ့ဝန်ထမ်းများအား မထမ်းစေလင့်။ ၀ိနည်းတော်နှင့်လည်းမလျှော်ညီ။
လွှတ်တော်မှ ထိုက်သင့်သော ဘက်ဂျက်ရံပုံငွေထားကာ ခေတ်ပညာတတ်ဘွဲ့ရကျောင်းအုပ်များက စီမံခန့်ခွဲသော ဆရာများဖြင့်သင်ကြားခွင့်ရှိရမည့် အခြေခံပညာရေးမှစသင့်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။
ထိုမှသည် မျိုးဆက်သစ်တို့တွင် ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးစည်းခြားလာကာ တဖြည်းဖြည်းကွဲပြားသွားမည့်သဘောရှိသည်။
ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးနှင့်ရောထွေးထားသောနိုင်ငံတို့သည် မြေကြီးမှရွှေသီးနေကြစေ အတွင်းပဋိပက္ခကြီးသော နိုင်ငံများဖြစ်နေကြသည်ကိုတွေ့ကြရမည်။
မြန်မာပြည်သည် မတူကွဲပြားသောလူမျိုးစု၊ဘာသာစကား၊သာသနာတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်ပေရာ ဘာသာရေးကိုရှေ့တန်းတင်၍နိုင်ငံရေးနှင့်ရောယှက်လေသမျှ တိုင်းရင်းသားများနှင့်ကြီးစွာသော ပဋိပက္ခတို့သာမြင်ကြရလိမ့်မည်။ အမေရိကပြည်တွင် အမေရိကန်တို့ပြုခဲ့သကဲ့သို့ အခြေခံဥပဒေကို ပထမဆုံးပြင်ဆင်မှုပြုရာတွင် ဘာသာရေးအာဏာဓမ္မစက်နှင့် နိုင်ငံရေးအာဏာစက်ကိုသီးသန့်စီခွဲထုတ်သင့်လှသည်။
ထိုမှသည်အနာဂတ်တွင် များလူခတ်သိမ်းငြိမ်းချမ်းကြသည့် ခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်သော ရွှေပြည်ကိုမြင်ကြရပေလိမ့်မည်။ ။
အောင်ဆန်း – အောင်ဆန်းစုကြည်
( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်ကင်းေ ရးနှင့်အခြားစာတမ်းများ စာအုပ်မှထုတ်နုတ်ဖော်ပြပါသည်)
အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များကို သဲကြီးမဲကြီးဖတ်ခြင်း၊ အခြား သူများ ပြောပုံဆိုပုံကို နားထောင်လေ့လာခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းတွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သူ မိတ်ဆွေရင်း တဦးထံမှ အကူအညီယူခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက် အညာသားတဦးအတွက် ထူးခြားလောက် သော အင်္ဂလိပ်စကားကျင်လည်မှုကို သူရရှိလာ၏။ထိုပထမစကားရည်လုပွဲတွင် အောင်ဆန်း ထောက်ခံခဲ့သောအဆိုမှာ သူ၏ ရေရှည်ယုံကြည်ချက်တရပ်အား ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကို သတိမူသင့်ပါသည်။ ထိုယုံကြည်ချက်မှာ သံဃာတော်များ နိုင်ငံရေးတွင် ၀င် ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုသင့်ကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
မကွယ်လွန်မီ တနှစ်ကျော်ခန့်က ပြောကြားခဲ့သော ရွှေ တိဂုံစေတီတော် အလယ်ပစ္စယံညီလာခံမိန့်ခွန်း၌ “ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကို ရောစပ်ပါမူ ဘာသာရေး၏ သဘောတရားကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်ပေ၏”ဟု ပြောခဲ့၏။ ရဟန်သံဃာများအား “အရှင်ဘုရားတို့က သာသ နာတော်ရောင် ထွန်းပြောင်အောင် အားထုတ်တော်မူကြပါ – ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့ မေတ္တာတရားပွားများ၍ သမစိတ္တနှင့် ညီရင်းအကို မောင်ရင်းနှမကဲ့သို့ နေနိုင်ကြပါလိမ့်မည် — ဤကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မှုသည် သာသနာ ဖက်ကသာကြည့်၍ မြင့်မြတ်သည်မဟုတ်ပါ၊ တပည့်တော်တို့၏ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော နိုင်ငံရေးကို ဆောင်ရွက်ရာရောက်ပါသည်ဘုရား” စသဖြင့် လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။
အများက နိုင်ငံသတ္တ၀ါ ပကတိအဖြစ်ဖြင့်မြင်ကြသော အောင်ဆန်းမှာ စင်စစ်တွင် ဘာသာရေး၌ လေးနက်စွာ တသက်လုံး စိတ်ဝင်စားသူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရေနံချောင်း၌ ကျောင်းတက်နေစဉ် ဖခင်ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် ၀မ်းနည်းကြေကွဲကာ ရဟန်းဘောင်ဝင်ရန်ပင် စိတ်ကူးခဲ့ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ရောက်စအချိန်ကလည်း အီတလီ လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနန္ဒကို ကြည်ညိုလေးစားလှသဖြင့် ဆရာတော်နှင့် အတူလိုက်ပြီး သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် မိခင်ထံ အခွင့်တောင်းဖူး၏။ အခွင့်ကား မရခဲ့ပေ။ သို့သော် လော ကုတ္တရာကိစ္စများကို အောင်ဆန်း ဆက်လက်၍ ဂရုတစိုက်အလေးထားပါသည်။နိုင်ငံရေးလောကထဲသို့ ခြေစုံပစ်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်း၌ပင် သူနှင့် အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတဦးအား သူ၏ “သစ္စာတ ရားနှင့် လုံးဝအပြစ်ကင်းစင်မှု ရှာပုံတော်ဘ၀ခရီး” အကြောင်းနှင့် ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံအရ ရိုးဖြောင့်နိုင် ရန် သတိပြုကြိုးပမ်းနေကြောင်းတို့ကို စာရေး၍ ရှင်းပြဖူးပါသည်။ ခေတ်လူငယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိတရား ခေါင်းပါးနေသည်ကို စိုးရိမ်မိကြောင်း၊ လောကဒဏ်လှိုင်းများကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းမရှိပါက ထိုအသိတရားများ လုံးဝကွယ်ပျောက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ဗလ မွဲပြာကျသောအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားမည်ကို စိုးရိမ်ပူ ပန်မိကြောင်း စသဖြင့်လည်း ရေးသားထားပါသည်။
၂ . ၉. ၁၉၆၀ ထုတ် မီးဒုတ်သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုကို သခင်အောင်ဆန်းပြောတဲ့စာပိုဒ်တချို့ 
“ဒီမှာဆရာ၊ ကျနော်တို့ က လူကြိုက်အောင်လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ဒီလို မဟုတ်မဟပ်ကို စိတ်ထင်ရာတွေ လျှောက်လုပ်နေကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ မကြာမီ ပျက်စီးပြိုကွဲပြီး ကျွန်သဘောက်ဖြစ်သွားကြမှာဘဲ”
“ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ အလောင်းဘုရားလက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့ကြတဲ့မွတ်လင်တွေရှိတယ်။ ဗရင်ဂျီတွေရှိတယ်။ အစကတည်းက ရှိလာခဲ့ကြတဲ့နတ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ တောင်တန်းသားတွေရှိတယ်”
“အဲဒီတောင်တန်းသားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာတုန်းက တချို့ ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ပြီး အရိုးစွဲနေကြတာတွေရှိတယ်။ သူတို့ တတွေဟာလည်းအားလုံးနိုင်ငံသားတွေဘဲ။ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်တွင်းကလွတ်အောင် တိုက်ထုတ်ကြတုန်းက ကျနော်တို့ ချည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ တတွေပါ ပါကြတယ်။
“အခု ကျွန်တွင်းက လွတ်မယ်မှ မကြံကြသေးဘူး။ သူတို့ တတွေအပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ပြီး ငါတို့ လူများစုရဲ့ ဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ရမယ်လို့ လုပ်လိုက်ရင်ကျုပ်တို့ ဟာ ခွေးလောက်တောင်
“ဆရာတို့တိုင်းပြည်ကို တိုင်းပြည်ရေးလို့ တွေးစမ်းပါ။ ဘာသာတွေ ဘာတွေညာတွေ လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့ ။ ကျနော်တို့ ဟာကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးတခုလုံးစည်းရုံးနေဖို့ လိုတယ်”
“အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာဆိုတာတွေဟာ ရှေးရှေးပဒေသရာဇ်မင်းတရားကြီးတွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ် ဘ၀င်လေပင့်ပြီးပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေပါ။
အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ လိုကြတာက ပြည်ထောင်စုကြီးထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့လူမျိုးအားလုံး၊ ဘာသာအားလုံး ဘယ်တော့မှ မပြိုကွဲဘဲ ခွဲထွက်သွားမယ့်လူတွေပေါ်မလာစေဘဲ နိုင်ငံစိတ်ဓာတ်တခုထံ ရှိနေအောင်သွင်းပေးဖို့စည်းရုံးပေးဖို့ 
“နိုင်ငံတော်ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ချင်ရင် ဆရာကိုယ်တိုင် ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီး အမည်ခံပြီး သာသနာ့ ဒါယကာတော်တက်လုပ်”
“ပြီးတော့ စည်ကုံးခရိုင်နဲ့ တကွ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်တော်မူ သီရိပ၀ရ ဓမ္မရာဇာဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီး သာသနာ့ ဒါယကာ ဘချို၏ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လို့ ဆရာ့ဟာ ဆရာ ကြေညာ၊ ကျနော်မပါဘူး”
ကြို ပြီး ပြောထားတယ်နော်။
ဘကကျောင်း တွေ ဘာသာရေး အစွဲ တွေ က နေ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဆိုရင် မျှ ဖို့ အတွက် တစ်ခြား ဘာသာ အတွက် ကျောင်း တွေ ကိုဖွင့်ခွင့် မပေးရင် ဘက ကျောင်း တွေ ပါ ပိတ် ဆိုတာ တော့ မချိုး နဲ့။
အခု လို ဒီမို ကရေစီ မရချိန်မှာ ရှိပြီး ဘက ကျောင်း တွေ လဲ သူ့ဟာသူ ရှိပြီး ကို ပြသနာ မလုပ်သင့်ဘူး။
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ လောလောဆယ် ကလေး တွေ သေစာ ရှင်စာ ကို အဲဒီ ကနေ အကျိုး ရနေတာ လက်တွေ့မြင်နေရလို့ဘဲ။
ခရစ်ယာန်ကျောင်း တွေ၊ အစ္စလာန် ကျောင်း တွေ ဖွင့်ဖို့ ကိုလဲ မဆွဲ သင့်သေးဘူး။
တစ်ခြား နိုင်ငံ တွေ မှာ ဒီ ပြသနာတွေ အများရှိ ရှိနေတယ်။
ခရစ်ယာန် ချာရတီ စာသင်ကျောင်း မှာ အိုင်တီ Admin အလုပ် ကို ၇ နှစ် နီးပါး လုပ် ရင်း တစ်ခြား သူတို့ ရဲ့ ပညာရေး ပိုင်း တွေ အစိုးရ ပေါ်လစီ တွေ ကိုပါ လေ့လာနိုင်ခဲ့လို့ပါ။
နောက်ပြီး ဘက ကျောင်း တွေ မှာ စာသင်ဖို့ ဘယ်လို ကလေး ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အယုတ်အလတ် အမြတ် ဘာသာ မရွေး လက်ခံ တယ်။
ဒါက လူ သားချင်း စာနာ တဲ့ ပုံစံ အပြည့် ဝင်နေပြီး သား။
တစ်ခြား ဘာသာ ကျောင်းတွေ ( အဓိက အစ္စလာန် ကျောင်း တွေ) တစ်ခြား သူတို့ ဘာသာ မဟုတ်တာ သူတို့ ဘုရားသခင် ကို မယုံကြည်တဲ့ သူ တွေ အတွက် တံခါး ဖွင့်ထားမယ် ထင်လို့ လား။
ဒီမှာတော့ အဲဒီကျောင်းမျိုး က အမုန်းတရား တွေ ဟောလွန်းလို့ ပိတ်ဖို့ ဖြစ်လာချိန်မှ တို့ ရွှေမြန်မာ က ထ ပြီး ကြောင်ဖို့ အကွက် မလုပ်ကြ နဲ့။
အခု ဘက ကျောင်း တွေ ပိတ်လိုက် ရင် အဲ ဒီ ကလေး တွေ ကို ဘယ်သူ က တာဝန် ယူမှာ တဲ့တုန်း။
ပြောနိုင်ရင် လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိတ်လေ။
အစိုးရ တာဝန် လို့ တော့ မလွှဲချ လေ နဲ့။ဝါးလုံးကွဲ ရီ လိုက်မယ်။
နဲနဲ ပါးပါး လေး လဲ ဝေးဝေးပြေး တွေးကြပါဦး။
အခုတော့ ကိုယ်လိုချင်တာ ဘဲ ဇွတ်ပြော နေကြတော့ တယ်။
Asawhole ဆိုတာ ကို ဘယ်သူ မှ မစဉ်းစား ကြတော့ဘူး။
. လောလောဆယ် ပြောချင်တာက တော့ ဘယ်ဘုန်းကြီး မှ ဒီ အရေးတွေ မှာ ဝင်မပါ ဖို့ဘဲ။
ပါချင်ရင် လူဝတ် လဲ ကြ။
အဲ့ဒအချိုးလိုချင်​လို့ အစိုးရက နှပ်​​ကြောင်း​ပေးထားပြီး ဘုန်း​တော်​ကြီးသင်​စာသင်​​ကျောင်း ဆိုတာကို အား​ပေးအား​မြှောက်​လုပ်​ခဲ့တာ ။ အဲ့ဒိလိုလုပ်​ခြင်းအားဖြင့်​ ​နောက်​​လေးငါးနှစ်​အတွင်းမှာ ​ကျောင်း​ဆောက်​​ပေးစရာ မလို​တော့ဘူး ။ ​ကျောင်းမရှိ​တော့ ပရိ​ဘောဂ​တွေ ဆရာ ​တွေ မလို​တော့ဘူး ။ ယဉ်​​ကျေးမှု အစဉ်​အလာလည်းမပျက်​ သူလည်း ​ငွေကုန်​သက်​သာ ။ ပြည်​သူကလည်း အပြစ်​​ပြောမရ ။ ပိုင်​​တော့ ပိုင်​သားဗျ
တချို့ကလည်း လူတိုင်းစာတတ်ေုမာက်​​ရေးဆို​ပေမယ့်​ အစိုးရ​ကျောင်းကိုရှိန်​ပြီး ဘက ပို့တဲ့ မိဘ​တွေ တပုံကြီး မျက်​မြင်​ကိုယ်​​တွေ့ပဲ​ပြောတာ​နော်​။
ဘက​ကျောင်းက ဆရာမ​တေ်ွလည်း လစာနည်း ကျူရှင်​မရှိ။
ဘုန်းကြီး​ကျောင်းဆို​တော့ ဘာပဲဖစ်​ဖြစ်​ လုံခြုံတဲ့အရိပ်​လျု့ ထင်​မှတ်​ပြီးတမင်​ကို ဘက​ကျောင်းပို့တာလည်းရှိတယ်​။တချို့ပိုက်​ဆံရှိ​ပေမယ်​ဘ့ သား​တွေလိမ္မာ​အောင်​ ဘုန်းကြီး​ကျောင်းမှာ ​ကျောင်းအိပ်​​ကျောင်းစား ဘုန်းကြီး​ကျောင်းသားလုပ်​ခိုင်းပြီး မူလတန်းက​နေ အတန်းကြီး​တော့လည်း ဘုန်းကြီး​ကျောင်းက​နေပဲ တက္ကသိုလ်​ထိ ဆွမ်းထမ်းရင်း တက်​လာတဲ့ ​ကောင်​​လေး​တွေ အသိထဲရှိတယ်​။အသိထဲရှိတယ်​။
မြန်​မာပြည်​အတွက်​ ဘက​ကျောင်း​တွေက မရှိမဖြစ်​အဖြစ်​ရှိ​နေ​သေးသလို ဘာသာခွဲ​ကျောင်း​တွေက​တော့ ငြိမ်းချမ်း​ရေးအတွက်​ မ​လောင်​ခင်​တားသင့်​​သေးတယ်​ထင်​တယ်​
ဗမာပြည်မှာ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ရောယှက်တာကို သားတို့ကတော့ ထူးပြီး မျက်စေ့စပါးမွှေး မစူးပေါင်…
နိုင်ငံရေးဆိုတာ အိမ်ရှင်မတယောက်ရဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲက ငရုပ်ဆုံနဲ့ ငရုပ်ကျည်ပွေ့ကြားမှာတောင် ရှိတယ်တဲ့…
နိုင်ငံရေးဆိုတာ….ဘုန်းကြီး ထိုင်တဲ့ဖျာနဲ့ ဘုန်းကြီးတင်ပါးအောက်က သင်္ကန်းစကြားမှာတောင် ရှိတယ်။…မရှိဘူးလို့ ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ…
ဒီတော့ ဘုန်းကြီးတွေလည်း..သင့်တော်သလိုသာ ဝင် စီမံ… ဒန်တန်တန်…
ကလေးတွေကိုတော့… ဘရိမ်းဝပ်ရ်ှမလုပ်ကြစေလို… ဘရိမ်းဝရ်ှဖြစ်အောင်.. မိဘတွေကိုယ်နှိုက်က.. တွန်းပို့မလုပ်ကြစေလို..။
အဲဒါ.. အနာဂါတ်..။ မိဘတွေရဲ့အနာဂါတ်…။
အဓိက​ပြောချင်​တာက ဘက​ကျောင်းမရှိရင်​ ​သေစာရှင်​စာ​တောင်​ တတ်​​တော့မှာ မဟုတ်​တဲ့က​လေး​တွေ မ​ရေတွက်​နိုင်​တာမို့ လက်​ရှိမှာ အရှုံးပဲထ်ွက်​မှာပါ။ရိုက်​သွင်း မသွင်း ထိလဲမ​ရောက်​​သေးပဲ ကိုယ်​ပိုင်​စဉ်းစား​တွေး​ခေါ်ဖို့ လူတိုင်းစာတတ်​ဖို့ကိုက အများကြီး​ထောက်​ပံ​နေ​သေးတယ်​ဆိုတာပါ။
ကျုပ်ဆိုရင်တော့.. ဘကကျောင်းကို.. ကျုပ်ကလေးလွှတ်မည်မဟုတ်..။
အစိုးရက.. ကလေးကျောင်းတွေကို.. တည်ဆောက်ပြုပြင်.. လုပ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်..။
ဘာသာရေးသင်ကြားမှုကိုတော့.. (လုပ်ချင်သပဆိုရင်) … ကိုရင်နဲ့ကလေးတွေကို.. After School အဖြစ်.. သင်ချင်သပဆို.. သင်စေသင့်..။
အတန်းပညာရေးနဲ့.. ဘာသာရေးကို.. မရောထွေးစေသင့်…။
သူကြီးမင်း က ဘယ်လို အရပ်ဒေသ က နေ ဒီ လို ပြောနေလဲ????
တူဂ မွတ်ပါစို ကားပါမစ်ရောင်းစား ကေအန်ယူ ဗိုလ်ချုပ်မြကရဲ…
သိသလောက်ပညာရေးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခုချိန်ထိတော့ ကြားဖူးနားဝ ၂ မျိုးပဲ ရှိသေးတယ်
၁။ နားကကြားတာကို ဦးနှောက်က မှတ်တာ
၂။ မျက်စိကမြင်တာကို မြင်တဲ့အတိုင်း ဦးနှောက်ကလိုက်လုပ်တာ
အဲ့ဒါကို အလွယ်ပြောရင် ရုရှပညာသင်စနစ်နဲ့ ဂရိပညာသင်စနစ် (အနောက်ကလက်ရှိသုံးနေတာ ဂရိပညာရေး)
ကျန်တာ အကုန် ရုရှပညာရေး ( အကျယ်သိချင်ကွကိုယ်ရှာဖတ်ကြ)
အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပေးရရင် လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀အဆုံးအဖြတ်ကို စားမေးပွဲတခုထဲကနေ အဆုံးအဖြတ်ပေးတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ဖြေဆိုနေကြရတဲ့ ပညာရေး မှန်သမျှဟာ ရုရှပညာထဲ အကျုံးဝင်ပါတယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျောင်သားအားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပညာရေးဆိုတာ မရှိသလို ဆရာမအားလုံး နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပညာရေးဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး
ဒါကြောင့်မို့ တိုးတက်လှတဲ့ အမေရိကားမှာတောင် ကျောင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စုစုပေါင်း ၂၆၀ ရှိတယ်
တကျောင်းနဲ့ တကျောင်းမတူဘူး ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ မတူသလို သင်ယူမှုတွေလည်း မတူဘူး
တချို့တွေ နွေရာသီမှာ ပိတ်တယ် တချို့ မပိတ်ဖူး စာသင်ရတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူချင်းတူပေမဲ့ အခံခြင်း မတူတော့ သင်ယူပေးရတဲ့ နေရာမှာလည်း ကွာပါတယ်
( ဒီအချက်က တောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲခြားပဲ စာသင်ပေးရတဲ့ အခါမှာ အခက်ခဲကြုံနေရတာ သင်ပေးဖူးတဲ့ ဆရာဆရာမတွေ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ)
လူတယောက်က အသက် ၀ (မွေးစ) ကနေ ၇ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ သင်ယူနိုင်မှုအကောင်းဆုံး ပါ
ခေါက်ရိုးကျိုးတဲ့ အသက်အရွယ်လို့ ပြောရမလားပဲ
အဲ့အချိန်မှာ သင်ယူမှုမမှန်ခဲ့ရင် ရလဒ်က အတော်ဆိုးပါတယ် ( အနီးဆုံး ပြောရရင် စင်ကာပူက ရန်ကုန်ကို အတုယူတယ်ဆိုတာမျိူးပါ ကိုယ့်လက်ထက်
မျိုးဆက်တဆက်လုံး ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ် )
အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်း ဆရာဆရာမတွေ ရာထူးတိုးမှုက စပြောကြည့်ရအောင်ပါ လက်ရှိတော့ သိပ်မသိ ကိုယ်မှီခဲ့သလောက်ပြောကြည့်မယ် (မှားချင်လည်း မှားနိုင်တယ် )
စစချင်း ဆရာမစလုပ်ရင် မူလတန်းပြဖြစ်တယ် နောက်တော့ အလယ်တန်းပြ ၊ အထက်တန်းပြ၊ ဒုကျောင်းအုပ်၊ လက်ထောက်ပညာရေးမှူးတို့ဘာတို့ နောက်တော့ မှ တဆင့်ခြင်း အငြိမ်းစားယူရတယ်
လူတယောက် လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ပညာရည် အပြည့်ဝဆုံး အချိန်မှာ အထက်ကိုရောက်ပြီး အငြိမ်းစားယူရပါတယ် ။
လူတယောက်လုပ်ငန်းခွင် မကျွမ်းကျင်ဆုံးအချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံး ပျိုးထောင်မှုကို စရပါတယ်
ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အချိန်မှာ အဲ့နေရာမှာ မရှိတော့ဘူး
သူများ တိုင်းပြည်က ဆရာဆရာမတွေ ပရိုတွေ မူလတန်း ကိုင်ရင် နားသည်အထိ မူလတန်းပါ
မူလတန်း ပရိုလို့ ပြောရမှာပေါ့ ( လစာတွေက အထက်တန်းပြထက် ပိုကောင်းတယ် )
social သင်တဲ့သူ ဘယ်အတန်းရောက်ရောက် social ပဲသင်ပါတယ်
ဒီက ကျောင်းတွေ ဆရာတယောက်ထဲ ဘာသာစုံ နေအောင် အတန်းစုံမှာ သင်ရပါတယ် ကျောင်းလိုအပ်ချက်ကို လိုက်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် မြို့ငယ် ကျောင်းငယ် ဘကကျောင်းတွေမှာ ပါ
ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာဘာသာရပ်ကို လိုက်စားဖို့ အခြေနေ သိပ်မပေးပါဘူး
၀မ်းရေးက ရှိသေးတော့ ကျူရှင်ဆိုတာကလည်း ရှိ်သေးတယ်လေ
ဘက ကျောင်းတွေဖျက်သိမ်းတာမှာ နည်းလမ်းမှန်ဖို့ လိုပါတယ်
ဘကမှာနေတဲ့ မိဘမဲ့တွေ မနည်းပါဘူး
အစိုးရဘတ်ဂျက် လှမ်းပြီး ပုတ်တာမို့ တော်ရုံတန်ရုံ စေတနာနဲ့တော့ ဒီအစိုးရက လှုပ်မယ် မထင်ပါဘူး
ဆိုတော့ ပြင်ချင်ရင် အစဆွဲထုတ် အမြစ်ပုပ်ရင် ဖြတ်ပြစ်မှရမှာပါ
ဘယ်ကစမလဲဆို ဆရာတွေက စပြင်ရမှာလို့
စစချင်းပြင်ရင်တော့ ပွက်ပွက်ရိုက်နေတာက ဆယ်စုနှစ်မနည်း တဂျိန်းဂျိန်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်
ရာစုတခု ချီမှ ရလဒ်ကောင်း ထွက်မှာပါ
ဒီပညာရေးပြင်နိုင် မပြင်နိုင် ဒီတောင်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင် မဖြတ်နိုင် က ဒီခေတ်မျိုးဆက်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုပါ
ပြင်ဖို့အရေး တောင်းဆိုကြတာတောင် တယောက်နဲ့တယောက် ပုံစံကွဲပြီး မတည့်ကြပါဘူး
တခါတခါ ဟာသမြောက်သလို တခါတခါ အလွန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်
ဒါကိုကလည်း ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာမြောက်နေသလား မသိဘူး
ကိုယ်တွေ မတည့်လေ သူတို့ ၀မ်းသာလေပါ
ဘယ်လိုနည်းနည်းနဲ့ပဲ တောင်းတောင်း တောင်းလို့ပြင်နိုင်ခဲ့ရင် ဒီခေတ်ကျောင်းသားသပိတ်က သမိုင်းတွင် ရာဇ၀င်တွင်အုန်းမှာပါ
ပြင်နိုင်ခဲ့ရင် သမိုင်း စာမျက်နှာသစ်ရေးထိုးနိုင်မှာမို့ နောက်လူကောင်းမှာပါ
လောလောဆယ် အားကျမခံ လေသေနတ်လာပစ်တာ
အဲလိုလေးလုပ်ပါ.. ပုရ်ှမမရယ်..။ သိတာလေးတွေ.. ရှင်းပြဦးမှပေါ့…။
ဘကပညာရေးကို.. ပြင်ပစ်ရမယ်သိနေကြတာ.. လူ၁၀၀မှာ.. ၉၀ထက်မလျှော့ဘူးလို့ထင်တယ်..။
ဒါပေမယ့်.. ပြသနာက..အချိန်ယူရမယ်.. အချိန်မတန်သေးဆိုတာပဲ..
အခုပြင်နိုင်အခုကောင်းလာတာလည်းမဟုတ်… မျိုးဆက် ၂-၃ဆက်လောက်စောင့်ရဦးပါမှ…
ဒါပေမယ့်.. ဒီလိုပြင်ရဲတာဟာ..တိုင်းပြည်အတွက်.. ကိုယ့်မိသားစု မျိုးဆက်အတွက်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမျြုတ်နှံမှုပဲ..။
ဘကကျောင်းကိုစီမံအုပ်ချုပ်သူ…နဲ့..ရာထူးတူလောက်.. ယူအက်စ်မှာဆို.. School Principalပေါ့.. ။
ကျောင်းအုပ်အလုပ်က.. ကျောင်းဆရာထက်.. ကလေးငယ်တွေအတွက် အဆပေါင်းများစွာ.. ပိုအရေးကြီးတယ်..။
အဲဒီအလုပ်တခုအတွက်လိုအပ်တာတွေ.. ပြထားတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်က.. ကူးတင်ယူလိုက်သဗျ…။
မိခင်ဘာသာစကား အခြေပြုဆိုတာကလည်း အကြောင်းမဲ့တော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး သေချာကြည့်တော့
ဒီနိုင်ငံမှာ လူမျိုးပေါင်း ရာချီ ရှိရာကနေ အခု update က ၃၀ ကျော်ပဲ လို့ ဆိုပြန်တယ် အတိကျတော့မသိရသေးဘူး
ဖြစ်ပုံက ဗမာစကား တတ်တဲ့ ကရင် က ဗမာလိုပြောတာနဲ့ ဗမာစကား မပြောတတ်တဲ့ ကရင်ဖြေတာကို ဗမာက သွားကောက်တော့ လူမျိုးတူပြီး အခေါ်ဝေါ်ကွဲထွက်လာတယ်
အဲ့မှာတင် လူမျိုးတွေ ဖောင်းပွကုန်တာ
အမှန်က အတူတူပဲ လူမျိုးက တခုထဲ
မြန်မာလူမျိုးက အနွယ် ၄ မျိုးပဲ ရှိတယ်ဆိုတယ်
၁။မြန်မာ – တိဘက် အနွယ် ( ဗမာ ၊ ချင်း စတာတွေ ပါတယ်)
၂။မြန်မာ – မလေးအနွယ် (ဆလုံ ….၊….. အများကြီးပါတယ်)
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိတာရှိရင် ပြောပြ လင့်ပေးအုန်း
ဒီနေ့ မောနင်းမီတင် မှာ MD ဦးနှောက်ဖောက်စားလာတာ သူကြီးကို အတုခိုးပြီး :loll:
ကျုပ်သာဆို.. ကိုယ့်တိုင်းရင်းဘာသာစကားမကလို့.. အေလီယန်နဲ့ဘီကွီကွမ်စပ်ကျတဲ့ဘာသာနဲ့သင်သင်ခွင်ြ့ပုတယ်..။
ဘေီဂွီဂွမ်( အေလီယန်+ဘီကွီကွမ်) ဘာသာစကား.. စာပေ..အဲဒါပဲတတ်တဲ့ကလေး.. ဘယ်နားသွားသုံးစားမလည်း..။
လူတွေကိုလိုက်လိုက်ချုပ်ချယ်.. ဥပဒေတွေစွတ်ထုတ်.. အလုပ်မဟုတ်..။
အစိုးရက..နေရာတကာ.. ကြောင်သေးပန်းနေတာကအစ.. ၀င်မပါသင့်..။
ဒါကိုတော့ သဘောချင်းမျှ ကြောင်းပါ။ :))))))))))))))
အဲ့ဒါပြောတာလေ ကိုယ့်မှာလည်း လိုအပ်ချက်ရှိတယ် ဆိုတော့ အကုန်တော့ မရနိုင်ဘူးလို့
တကမ္ဘာလုံး English အခြေပြု သုံးနေရတာကြီးက အသိသာကြီးကို
မီတင်မှာ နားမလည်ဘူး သေချာရှင်းပြလို့ ပြောတော့
နင်က နင့်ခံစားချက်နဲ့ ပြောနေတာ
ငါက ခြုံပြောတာဆိုပြီး ပွဲသိမ်းသွားတယ်
တကယ်တော့ သူလည်း တွေနေတာပဲ အဲ့တချက်ကို :loll:
ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရတော့ အဲ့ဒါထက် အရေးကြီးတာလုပ်ရမှာလို့ ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်ရမှာ အားနာလို့
တဆင့်ပြီးမှ တဆင့် သွားမယ်လေ နော့်
ဘာသာ​ရေးနဲ့ပညာ​ရေး​ရော​ထွေးတာမဟုတ်​ဘူး အဲ့လိုဆို အစိုးရအ​ကောင်​အထည်​မ​ဖော်​ခင်​မထားလိုက်​ရတဲ့က​လေး​တွေက စ​တေးခံ​ပေါ့။ဟုတ်​​သေးဘူး။
ပြီး​တော့ ဘက​ကျောင်း ​တွေမှာလည်းေုဒ္ဓဘာသာ​တွေပဲ တက်​ကြတာများပါတယ်​။
ဘကကျောင်းတွေဖျက်သိမ်းပေးဆိုတာနဲ့တပြိုင်ထဲ… တိုင်းပြည်ဘက်ဂျက်ရဲ့.. ၂၀%အထိပညာရေးမှာတိုးပေးဖို့တောင်းတယ်လေ…။
ဥပဒေထဲပြဌာန်းပြီးရင်.. လုပ်ထုံးထွက်မယ်..။ အဲဒီကနေ.. ဘကကျောင်းကို.. အစိုးရကထောက်ပံ့ငွေ.. ရပ်ကွက်ပြည်နယ်လူထုကထောက်ပံ့ငွေနဲ့.. ခေတ်မှီကျောင်းပြောင်းယူ… တဆင့်စီလုပ်ယူသွားရမှာပါ..။ ဘကကျောင်းအကုန်တပြိုင်တည်းဖျက်.. ဘုန်းကြီးတွေအလုပ်ဖြုတ်.. ဒီလိုလုပ်ရမှာမဟုတ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. ပါ့ဗလစ်ကျောင်းတွေကို.. လူထုရဲ့အခွန်ငွေနဲ့ရပ်တည်စေတယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့.. ၃-၄နှစ်လောက်က.. ကယ်လီဖိုးနီးယားဘက်ဂျက်လိုငွေတွေစွတ်ပြနေတော့.. ဂါဗနာက.. လူထုကိုစိန်ခေါ်တာတခုလုပ်တယ်…
ကလေးကျောင်းတွေကို.. ထောက်ပံ့ကြေးငွေလျှော့ချရမလား..။ လူထုအခွန်တိုးကောက်ရမလား…တဲ့..။
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်.. ကလေးမရှိတဲ့..ကျုပ်အကိုတောင်.. အခွန်တိုးကောက်ပါစေဆိုပြီး.. ဗုတ်လိုက်သဗျ..။
တပြည်နယ်လုံး အနာခံဝိုင်းဗုတ်လိုက်တာ.. ဥပဒေဖြစ်သွားပြီး.. ကလေးကျောင်းတွေကို ငွေတွေပိုလျှံအောင်ဝင်လာပါရောလား…။
ဘယ်သူမဆို.. ကိုယ်တန်ရာပဲ.. ရမယ်..။
အသက် ၉၀ ဂျီဂျီဖားသားကြီး(great Grandfather) က မွေးတောင်မမွေး ရသေးတဲ့ ကလေး ကို ညံ့တယ် ပြောသလိုဖစ်နေဦးမယ်။ lol:-)))))
ဒီမိုကရေစီ အစစ် လမ်းကြောင်း (အမှန်) ပေါ် ရောက်အောင် အရင်ဝိုင်းတွန်း တင်ပေးကြပါဦး။
တဘူတာဝင်​တဘူတာထွက်​ အဓိက​တွေကိုကြည့်​ဖို့ ဖြည့်​ဖို့အများကြီးလို​သေးတယ်​။ဥပမာ ဘက​ကျောင်းဖျက်​ အစိုးရ​ကျောင်းတက်​ဆိုတိုင်း ထွက်​မတက်​နိုင်​ကြ​သေးဘူး​နော်​။ဘက​ကျောင်းက က​လေးထိန်းရင်းတက်​၊မိဘလုပ်​ကူရင်းတက်​ တက်​လို့ရ​တော့ ပညာသင်​ဖို့သိပ်​မရှိန်​​တော့ဘူး။
အဓိကက စားဝတ်​​နေ​ရေး။စားဝတ်​​နေ​ရေးမ​ပြေလည်​တဲ့လူ​တွေက အခမဲ့ သင်​​ပေးပါမယ်​ဆိုတာ​တောင်​မလာနိုင်​ဘူး​နော်​သူကြီး။အ​ရေးကြီးတာ​တွေအရင်​မ​ပြေလည်​ခင်​ ဘက​ကျောင်းဖျက်​မယ်​ဆို က​လေး​တွေအရှုံးအရင်​ထွက်​မှာ
ဒါက ကိုယ်​ကြုံခဲ့တာ​တွေနဲ့ယှဉ်​ မြင်​ပြတာပါ။
မင်းတုန်းမင်းနှင့် ငါးခြောက်ပြား၊ ကြိမ်လုံးနှင့် ကျောင်းသား၊ ဆရာနှင့် …..
ကြိမ်လုံးအကြောင်း စဉ်းစားမိတိုင်း အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀တုန်းက ကြုံခဲ့ရတာလေးတခုကို အမြဲ သတိရနေမိပါတယ်။
မြန်မာစာအချိန်မှာ ပင်ရင်းစကားပြေ လက်ရွေးစင်ထဲက “မင်းတုန်းမင်းနှင့်ငါးခြောက်ပြား” ဆောင်းပါးကို သင်ပြီးစပေါ့။ မင်းတုန်းမင်း ငယ်ရွယ်စဉ် မောင်လွင်ဘ၀က စံကျောင်းဆရာတော်ဆီမှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတယ်။ တစ်နေ့မှာ အင်းသူကြီးငကြူက ငါးခြောက်ပြားကြီး တစ်ပြားလာပြီး လှူတယ်။ ဆရာတော်က ငါးခြောက်ကို သိပ်ကြိုက်ပါသတဲ့။ ကျောင်းမှာကလည်း ငါးခြောက် ပြတ်လပ်နေချိန်ဖြစ်တော့ ဆရာတော်က မောင်လွင်ကို ကျက်သရေခန်းထဲမှာ သေသေချာချာ သိမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ဆရာတော် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတဲ့အခါ မောင်လွင်ကို ငါးခြောက်ဖုတ်ခိုင်းတော့ ငါးခြောက်က ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ ဆရာတော်ကတော့ လက်ဆေးပြီး နှမ်းဆီမွှေးမွှေးနဲ့ ရောက်လာမယ့် ငါးခြောက်ဖုတ်ကို စောင့်နေတာပေါ့။ မောင်လွင်မှာ ဘယ်လိုမှ ရှာဖွေမေးမြန်း စုံစမ်းလို့မရဘဲ ဗျာများနေခိုက် “ဟဲ့ ငလွင်၊ မရသေးဘူးလား” လို့ မေးလိုက်တော့ ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်နဲ့ပဲ ငါးခြောက်ပြားကြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်း တင်လျှောက်ရတော့တယ်။ “ငလွင် လာခဲ့” လို့ ထားဝယ်ကြိမ်ကိုဆွဲပြီး ခေါ်လိုက်တဲ့ ဆရာတော့်အသံက ကျောင်းသားအားလုံးရဲ့ နှလုံးသားကို ကန့်လန့်ဖြတ် ၀င်သွားပါသတဲ့။ “ဟဲ့ ငလွင်၊ နင်ဟာ ဘုရင့်သား၊ အကြောင်းညီညွတ်ရင် နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ် မင်းလုပ်ရမယ့်သူ၊ ဒီလိုလူက ငါးခြောက်ပြားလေး တစ်ချပ်ကိုတောင် လုံခြုံအောင် မစောင့်ရှောက်နိုင်ရင် နိုင်ငံကို နင်ဘယ်လို လုံခြုံအောင် လုပ်နိုင်တော့မလဲ” လို့ မိန့်ပြီး အချက်ပေါင်းများစွာ ရိုက်နှက်ဆုံးမပါသတဲ့။
ဒီဆောင်းပါးကို သင်ပြီးတော့ ဆရာက သင်ရိုးထဲက မေးခွန်းတွေကို ဖြေခိုင်းပါတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုက “စံကျောင်းဆရာတော်၏ ဆုံးမမှုကို သင်လက်ခံပါသလား” လို့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးပေါက်တဲ့ မေးခွန်းပါ။ နောက်တစ်နေ့ မြန်မာစာ အချိန်ရောက်တော့ ဆရာဟာ အတန်းထဲကို ခြေသံပြင်းပြင်းနဲ့ ၀င်လာပါတယ်။ အဖြေလွှာတွေကို စားပွဲပေါ် ဘုန်းကနဲမြည်အောင် ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဆရာ့မျက်နှာက နီပြီးတင်းလို့။ တစ်တန်းလုံးကို ဝေ့၀ဲပြီး ကြည့်တယ်။ တစ်တန်းလုံးကလည်း ငြိမ်လို့။ ဆရာ ဘာဖြစ်လာတာပါလိမ့်လို့ တွေးနေကြပုံပဲ။
ဆရာက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကိုခေါ်ပြီး အတန်းရှေ့ ထွက်ခိုင်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးခုံက ကျောင်းသားတစ်ယောက် ထွက်လာပါတယ်။ ဆရာက အဖြေလွှာတစ်ရွက်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး အဲဒီ ကျောင်းသားကို ပေးလိုက်တယ်။
“ဒါ မင့် အဖြေလား”
နည်းနည်း အံ့သြနေပုံနဲ့ ကျောင်းသားက သူ့အဖြေကို ဖတ်ပါတယ်။ မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်တော့ စံကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ ဆုံးမပုံကို သူမကြိုက်ကြောင်း၊ ဆုံးမမှု သဘောထားကို သံသယဖြစ်မိကြောင်း၊ ဆရာတော်ရဲ့ အဲဒီအချိန်က စိတ်ခံစားမှုဟာ တပည့်ကို လမ်းညွှန်ချင်စိတ်ထက် မိမိ အလွန်တရာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ငါးခြောက်ဖုတ်ကို ဘုဉ်းမပေးရတဲ့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒေါသစိတ်က ပိုပြီး ကြီးမားနေနိုင်ကြောင်း။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ဒီလောက်ရိုက်နှက် အပြစ်ပေးစရာ မလိုကြောင်း၊ နားဝင်အောင် ဆုံးမလျှင် ရပါလျက်နှင့် သေရာပါ အမာရွတ်ထင်အောင် ရိုက်နှက်ခြင်းဟာ ဒေါသစိတ်ကြောင့်ဟု သံသယဖြစ်စရာရှိကြောင်း၊ ဘုရားသားတော်တို့မည်သည် ရသတဏှာဖြင့် ဆွမ်းဘုဉ်းမပေးသင့်သည်ကို သတိရသင့်ကြောင်း၊ ဆရာကိုယ်တိုင်က ၀ိနည်းကို မတိန်းသိမ်းနိုင်ဘဲ တပည့်ကို ဆုံးမခြင်းမှာ စဉ်းစားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသားနာမှ အရိုးစွဲအောင် မှတ်မည်လို့ထင်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးဆုံးမခဲ့ပေမယ့် မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်မှာ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလိပ်လက် ထိုးပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီဆုံးမနည်းဟာ မအောင်မြင်ကြောင်း အဲဒီလိုတွေ ဖြေထားတာဗျ။ သူတစ်ကြောင်း ဖတ်လိုက်၊ ခိကနဲ ကြိတ်ရယ်လိုက်ကြနဲ့ ။ ဆရာကတော့ ကျောင်းသားတွေရယ်လေ ဒေါသထွက်နေလေပါပဲ။
ကျောင်းသား ဖတ်ပြီးသွားတော့ ဆရာက သူ့ကို မေးတယ်။
“မင်း ငါ့ကို နောက်တာလား”
“ဟာ…..၊ မဟုတ်ဘူး ဆရာ၊ ကျွန်တော် မေးခွန်းကို ဖြေတာပါ”
“ကဲ….၊ အားလုံး သူဖြေတာကို လက်ခံကြသလား၊ တစ်ယောက်စီမေးမယ်၊ ကဲ မင်းကစ၊ သူဖြေတာ မှန်သလား မှားသလား”
ပထမဆုံး အမေးခံလိုက်ရတဲ့ ရှေ့ဆုံးခုံကကျောင်းသားဟာ ရုတ်တရက် ဘာဖြေရမှန်း သိပုံမရဘူး။ အဖြေရှင် ကျောင်းသားကို ကြည့်လိုက်၊ ဆရာ့ကိုကြည့်လိုက် ဘေးဘီကို ကြည့်လိုက်နဲ့။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာတော့ အဲဒီကျောင်းသားရဲ့ အဖြေကို ကြိုက်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့လို ခံစားမိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့လို မဖြေတတ်ဘူး။ သူ့လို ထောင့်စေ့အောင် မမြင်တတ်ဘူး။ ပြီးတော့ သူ့လို မဖြေရဲဘူး။ တစ်တန်းလုံးလိုလိုလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲလို့ ထင်တယ်။ သူတို့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။
ရှေ့ဆုံးက ကျောင်းသားခမြာ တုန်သွားပါတယ်။ အဖြေရှင်ကျောင်းသားကို တစ်ချက် ခိုးကြည့်ပြီး ခေါင်းငုံ့ချလိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ဆရာက မှန်သလား မှားသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်း (၂) ခုကို မေးနေတယ်ဆိုပေမယ့် အမူအရာ၊ လေသံ၊ ဖန်တီးထားတဲ့ဝန်းကျင် အငွေ့အသက်တွေက “မှားတယ်လို့ ဖြေစမ်း၊ မဖြေရင် ကြိမ်လုံး” လို့ ပြောပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆရာဟာ ကျောင်းသားတွေကို လိမ်နေသလို သူတရားပါတယ်ဖြစ်အောင် သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြန်လိမ်နေတာပါ။ ဒါကို အဲဒီကျောင်းသားလည်း သဘောပေါက်ဟန် တူပါရဲ့။
တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မေးလာလိုက်တာ ကျွန်တော့်အလှည့် ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် ထရပ်လိုက်တယ်။ အသက်တစ်ချက် ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တယ်။
အဖြေရှင်ကျောင်းသားကို မကြည့်ရဲပါဘူး။ ခေါင်းငုံ့ပြီး ခုံပေါ်ကစာအုပ်ကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ ထူးခြားတာက ကျောင်းသားအားလုံးလည်း အဲဒီလိုပဲ။ လူကုန်သွားတော့ ဆရာက အဲဒီကျောင်းသားကို နောက်ပြောင်မှုနဲ့ အတန်းရှေ့မှာ ရိုက်ပါတယ်။ ကြိမ်လုံးသံ တစ်ချက်ကြားရတိုင်း ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာမှာ နာ,နာသွားသလိုပဲ။ တစ်တန်းလုံးလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ ခံစားနေရမှာပါ။
ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရဲတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ဒီလိုကျောင်းသားမျိုး ဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီက ဆန့်တွေးလိုက်ရင်တော့ နိုင်ငံပေါ့ခင်ဗျာ။ ဒါ ဆုံးရှုံးမှုပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ဟာ ခံစားမှုချင်း တူပါလျက်နဲ့ သူ့လို မဖြေရဲခဲ့ရတာလဲ။ ဖြေရဲသူ ရှိလာတာတောင် ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လို့ သူမှန်တယ်လို့ မပြောရဲခဲ့ရတာလဲ။
အာရုံထဲမှာတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြုံကြိုက်ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ ကြိမ်လုံးတွေ၊ ကြိမ်လုံးတွေ၊ ကြိမ်လုံးတွေ…….။ ခက်ထန်တဲ့ အမူအရာတွေ။ ၀ဲခနဲ….. ၀ဲခနဲ၊ တင်းခနဲ…… တင်းခနဲ၊ ရွှမ်းခနဲ…….ရွှမ်းခနဲ၊ အမေရေ……….ကျွန်တော် ကြောက်လှချည့်။
[မောင်သစ်ဆင်း ၏ ကြောက်စိတ်ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြချက်]
ကျွန်မ သာ ဆို ကြိမ် နဲ့ လဲ အဆော် မခံရ ဘဲ အမှန် ကို ရောက်အောင် ဖြေနိုင် တဲ့ နည်းလမ်းသုံးမယ်။
အသား လဲ အနာမခံဘူး။ ကိုယ့် လိုတာလဲ ရစေရမယ်။
ဘကပညာရေးနဲ့.. ဘုန်းကြီးကြောက်စိတ်က.. မောင်လွင်ကိုဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးသွားသလည်း.. သမိုင်းမှာဆက်ပြတယ်လေ…။
အဲဒီခေတ်က.. ဧရာဝတီတကြောတက်လာမယ့်.. တက်လာတဲ့.. အင်္ဂလိပ်သဘောတွေကို. စဉ့်အိုးကြီးတွေထဲ.. ဆီတွေဖြည့်..ဖောင်မှာကောက်ရိုးတင်.. မီးရှွိှုပြီးမြစ်ညာကမျောချလိုက်ရင်.. မီးလောင်အောင်ဖြိုခွင်းနိုင်တယ်..တဲ့..။
အဲဒါနဲ့.. ကနောင်မင်းက.. ရေမြုတ်ဗုံးဆိုပိုထိရောက်မယ်တွေးမိလို့.. သူ့အတွေးအခေါ်နဲ့သူ.. အောင်ပင်လယ်ကန်မှာ.. စမ်းသပ်နေတာပါ…။
ဒါကို.. ဘုန်းကြီးဆို..ငါးခြောက်ပြားလက်ချက်နဲ့သေအောင်ကြောက်စိတ်အခံရှိတဲ့..မောင်လွင်(မင်းတုန်းမင်း)က.. ဆွမ်းစားနေတဲ့..မင်းဆရာဘုန်းကြီးစိတ်ကောက်တော်မူတာကို. အကြောင်းပြုပြီး. ရေမြုတ်ဗုံးစမ်းသပ်ခွင့်ပိတ်ခိုင်းလိုက်တာဗျ…။
အဲဒီမောင်သစ်ဆင်းဆောင်းပါးရဲ့.. မူလရည်ရွယ်ချက်က.. မြန်မာ့ဘုန်းကြီးအစဉ်အဆက်လုပ်လာခဲ့တဲ့.. ကြိမ်နဲ့ရိုက်ဆုံးမတာဆိုတာ….မသင့်တော်…မလုပ်သင့်ကိုပြတာ..။
အဲ့ဒါကို ပြောချင်တာပါ အရီးရယ်
“အသားလည်း မနာစေရဘူး လိုတာလည်း ရစေရမယ်”
ဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့ အတွေး Thinking ဘက်ပြန်ရောက်သွားပြီ အဲ့ဒါက
နာဇီလူသတ်စခန်းကို ရောက်သွားတဲ့ နှိပ်စက်ခံ ဂျူးတယောက်က လွတ်လာခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းရှိတယ်နော်
ဘ၀တူတွေ သေဖို့ စောင့်နေခဲ့တဲ့ အချိန် သူက လွတ်ဖို့ နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်စဉ်းစားနေခဲ့တယ် နောက်ဆုံး လူသေယောင်ဆောင် အ၀တ်စားဗလာနဲ့
ရက်အတော်ကြာဟန်ဆောင်ပြီး လွတ်မြောက်ခဲ့တာ ကမ္ဘာကျော်နော် နာမည်မေ့နေလို့
အဓိကက လူစိတ်မရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ လက်က လွတ်မြောက်ရှင်သန်ဖို့ နည်းလမ်း ကို ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီး ဖန်တီးယူရတာပါ
ပညာရေးအတွက် (လောကီ အတတ်ပညာအမျိုးမျိုး)
အစိုးရ အုပ်ချုပ်မူ့အောက် မျိုး ကိုယ်ပိုင် ကျောင်းမျိုး
ပညာရေးသီးသန့် သင်ပေးတာ ဖြစ်ဖို့လိုဒယ်.. ခတ္တာက စစ်တပ်က ဘာသာရေး အသုံးချပီး လူတွေဆိတ်ကို ဖုံးလွှမ်းထားတာစိုဒေါ့ မီလွယ် မလွယ်။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ပညာရေးကို အားပေးတဲ့ အစိုးမရ တက်လာမှဗဲ လမ်းစပေါ်မြည်။
အဲလိုတွေ… ဖြစ်ကုန်.. ဖြစ်ဆဲ.. ဆက်ဖြစ်လတံ့..။
တဂျီး ဆီ ကို သွားးးး
ဟို ကိစ္စကိုပဲ ဆွဲမန့်နေတာလည်းလို့ မေးးးး
အယ်ဒီတာသင်ပုန်းက ဧပြီလဆိုလို့ မရောက်သေးပဲ တဂျီးက ဘာတွေတင်ထားပါလိမ့်ဆိုပြီး ၀င်ဖတ်တာ မတ်လဟာဖြစ်နေတယ်……
.တော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ မောင်သစ်ဆင်း ရဲ့အတွေ့အကြုံပါ
..အစိုးရကျောင်းတွေ…နယ်စွန်နယ်ဖျား မကျန်..ရေမီး အပြည့်အစုံ..
…ဆရာ/ဆရာမ အပြည့်အစုံနဲ့ ဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်..
..သဂျီး ငြင်းမဲ့ ခေါင်းစဉ် ပြောင်းမှာ ကျိန်းသေတယ်..
…အိုက်အခြေနေ ရောက်ဖို့ နှစ်တစ်ထောင် တော့ မစောင့်ရလောက်ပါဝူး
ဥပမာ မိဘမဲ့တွေကို စောင့်ရှေက်ကျွေးမွေးရင်း စာသင်ပေးနေတဲ့
အဲသလိုပဲ ကချင် ခရစ်ယာန်တွေဘက်မှာလည်းရှိတယ် ၊
မိဘမဲ့တွေကို လူမှုဝန်ထမ်းဌာနက တာဝန်ယူပေမယ့် တစ်နိူင်ငံလုံးမှာ မတတ်နိူင်
အစိုးရကလည်း ရေးကြီးခွင်ကျယ် စဉ်းစားမယ် မထင် ၊
ယဉ်ကျေးလိမ်မာ.. ဓမ္မစကူး.. နွေရာသီသင်တန်း..။ တရားစခန်း စသဖြင့်ပေါ့…။
ယူအက်စ်မှာလည်း.. ကလေးတွေကို မြန်မာစာသင်ပေးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိပါတယ်.။ ကျုပ်ကလေးတောင် သွားသင်ဖူးသေး…။
ခရစ်ယန်တွေလည်း.. သင်ပေးနေတာပဲ..။ စန္ဒယားတို့.. ဘဲလေးအကတို့တောင်အပိုပါသေး..။